okuzinzileyo kwepakethe okukodwa kwabakhiqizi ababonakalayo - i-china iphakethe stabilizer yabathengisi abasobala & ifektri
I-PVC stabilizer impahla eluhlaza yamapayipi wepulasitiki we-spray spray
I-plasticizer efakwe kumatrix e-PVC inyusa ukuguquguquka kwayo cishe kunoma yiliphi izinga elifunekayo futhi inweba kakhulu ububanzi bezicelo ze-PVC eyenziwe ngopulasitiki. Ikakhulu esetshenziselwa amashubhu (ukudla, ezokwelapha), ama-hoses (ingcindezi, ingadi, ipompo), ama-gaskets, iminyango ye-swing kanye ne-handrails. Ama-Stabilizers anokuqina okuphezulu kokushisa, iphunga elincane, ikhwalithi yomoya enhle yasendlini, ukuhambisana okuhle nama-plasticizers.
Ama-stabilizers wamahhala anobuthi wokuphrinta amashidi we-PVC acacile wokuphrinta okuthambile kwe-PVC
Ngaphandle kwamafilimu e-PVC aqinile, kukhona neqiniso elikhulu lezicelo zeCaZn Stabilizer esekelwe amafilimu e-PVC aguquguqukayo. Imakethe ilawulwa amafilimu afakwe kupulasitiki, yize amafilimu aguquguqukayo angenalutho angena emakethe. Le filimu eguquguqukayo isetshenziswa kakhulu kumafilimu e-lamination, amafilimu wokugoqa iwindi, ifilimu yokuzilibazisa, ifilimu yokukhangisa, amafilimu ancipha, amafilimu okusonga imoto, amafilimu wokuphrinta, amafilimu wezimpawu zomgwaqo, amafilimu wedivayisi yamathoyizi, amafilimu ezokwelapha, izingubo zethebula njll. ukucubungula okuhle kakhulu, ukuzinza okuphezulu kokushisa, izakhiwo eziphansi zepuleti, iphunga eliphansi, ukuphrinta okuhle kakhulu.
Iphakethe elilodwa Lokushisa Okuqinisayo kwamashidi epulasitiki roll eqinile nokugoqa amata wefilimu e-PVC
Ifilimu eqinile ye-PVC isetshenziselwa ukupakisha umkhiqizo wemithi ilungele ukupakisha amaphilisi, amaphilisi, imijovo, imijovo nezinye izinto eziningi zezokwelapha. Futhi, esetshenziselwa amathoyizi, amagajethi, okumile, izimonyo, amathuluzi, izinto zokudla, umhlobiso, izinto zokwakha nezimboni ezahlukahlukene ngenhloso yokupakisha. Lawa mafilimu akhiqiza kakhulu kusuka ku-Ca / Zn PVC Stabilizers njengoba inesikhathi eside, amandla aqine kakhulu, ubufakazi bomswakama, ukumelana nezinyembezi, akukho zinsimbi ezisindayo eziyingozi, i-phenol, i-scratch mahhala. Futhi, ukupakisha okuguquguqukayo kuhola ukuthambekela kokupakisha njengoba kungagcini ngokunikeza ukuvikelwa kumikhiqizo kepha futhi kunikeza lula kubathengi kanye nokuthinta okuhle imvelo.
PVC Izithasiselo, I-PVC Heat Stabilizer Ye-Flexbile, I-PVC Isinqinisi Esingenabuthi, I-PVC Heat Stabilizer, I-PVC One Pack Stabilizer, Isisimamisi se-PVC,